Fanamarinana ny zavamisy ao Nepal amin’ny fotoanan’ny valan’aretina · Global Voices teny Malagasy
"Niteraka fielezam-baovao diso marobe ny fihanaky ny viriosy"
Voadika ny 10 Avrily 2021 4:20 GMT
Pikantsary avy amin'ny Tranonkala South Asia Check.
Manomboka amin'ny famoahana ireo sary mamitaka ao amin'ny media sosialy momba ny doro tanety tsy voafehy vao haingana ka hatramin'ny fanaratsiana ireo vaovao hosoka COVID-19, mihantsy amim-pahavitrihana ny fiparitahan'ny vaovao diso ao Nepal ny vondrona South Asia Check.
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 9 septambra 2015 ilay vondrona, fisantarana andraikitra mahaleo tena, tsy miankina amin'ny antoko, tsy mitady tombombarotra manolo-tena hiady amin'ny fampielezana vaovao diso amin'ny media sosialy sy ireo sehatra anjotra hafa.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices, nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fanamarinana ny zava-misy i Deepak Adhikari, mpamoaka lahatsoratra Azia Atsimo:
Misy ny fironana hifantina zava-misy ary hampiseho azy ireo hifanaraka amin'ny tetipanorona manokana. Mitady hanao fanambarana tsy voamarina sy diso ireo mpanao politika, mpiasa birao, mpitondra orinasa, vahoaka manam-pahaizana sy ny hafa. Mamitaka olona matetika izy ireo. Ka ny asanay dia ny manolotra vaovao marina ho an'ny besinimaro. Mampihatra ny asa fanaovan-gazety ho tombontsoan'ny besinimaro izahay. Ilaina ny fanamarinana ny zava-misy mba hialana amin'ny lainga ary hanampiana ny olona mba hahazo vaovao marim-pototra sy mifototra amin'ny porofo.
Nohamafisina vao tsy ela akory izay ity andraikitra ity rehefa nofongarin'ny vondrona ireo sary naparitaka be momba ny doro tanety izay nanempotra an'i Nepal.
Nahitàna fitomboan'ny loto tsy mbola nisy toy izany tao Kathmandu, renivohitr'i Nepal tamin'ny herinandro farany tamin'ny volana marsa 2021. Nilaza ny manam-pahaizana fa noho ny doro tanenty nandripaka ala sy ny setroka avy tamin'izany no anton'ny fitomboan'ny loto.
Raha tototry ny vaovao, fampahalalana, sary ary horonan-tsary momba ny doro tanety ny fantsona media sosialy, ny sasany kosa nizara sary taloha avy any amin'ny firenen-kafa hanasongadinana ny toe-draharaha. Nanamarina ireo sary ireo i Asia South Check ary nahita azy ireo fa mamitaka sy nalaina avy tamin'ny doro ala tany Etazonia, Kanada ary Indonezia ny sary.
Nahatratra 600 tamin'ny 26 Martsa ny tondron'ny kalitaon'ny rivotra (AQI), in-20 avo heny noho ny haavo notakian'ny Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny Fahasalamana (OMS). Tokony ho latsaky ny 150 ny AQI na dia amin'ny tolakandro maloto indrindra amin'ny taona aza.
Noho ireo doro tanety an-jatony nirehitra nanerana an'i Nepal, izay niteraka setroka sy lavenona ho an'ny mponina no nahatonga ny taha ambonin'ny AQI. Nandrava ny tontolo iainana tamin'ny volana marsa izay nanimba ala mihoatra ny 700 hekitara ny ririnina maina tsy mahazatra nahitana 15%-n'ny rotsak'orana ara-dalàna monja tamin'ny volana Janoary sy Febroary .
Doro Tanety manerana an'i #Nepal miharatsy mandritra ny andro maro ny #AQI
Nanamarika i South Asia Check fa niditra Twitter sy Facebook ny Nepaley mba hanintona ny sain'izao tontolo izao mikasika ny doro tanety. Nalaza tao amin'ny Twitter tany Nepal nandritra ny andro maromaro ny tenifototra #PrayforNepal, saingy mandiso hevitra sy tsy marina ny sasany tamin'ireo sary doro tanety nozaraina tao amin'ny media sosialy.
Tsy vao sambany nanao fanentanana lehibe hanamarinana ny zava-misy i South Asia Check. Ny taona 2020 dia niavaka ho an'ny ekipa izay nanala tamin'ny fomba mavitrika ny hosoka sy ny “vaovao faikany” mifandraika amin'ny valanaretina coronavirus.
“Niteraka fitobaham-baovao diso marobe ny fihanaky ny viriosy”, hoy i Deepak Adhikari. “Ary tsy nahagaga izany satria miroborobo ao anatin'ny tontolo tsy azo antoka ny teôrian'ny tetidratsy sy ny lainga.”
Mifantoka amin'ny fampahalalana diso mifandraika amin'ny COVID-19 tany am-piandohana, nofongarin-dry zareo ny vaovao tamin'ny horonantsarin'ny World Doctor Alliance, ny hafatra voalaza fa avy amin'ny governemanta momba ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina, nilaza fa efa talohan'ny aretina ny fitaovana fitsapana covid-19, ny filazan'ny praiminisitra Nepaley momba ny torolàlan'ny OMS mikasika ny fanamarinana fahafatesana COVID-19, sarina taratasy fidiovana taloha tany India mivezivezy ho sarin'ny hopitaly coronavirus any Nepal, ary ny OMS mamerina mijery ny haben'ny risika coronavirus ho an'i Nepal ankoatra ny hafa.
Sary avy amin'ny Unsplash noforonin'i Ruth Burrows. Napetraka ao amin'ny United Nations Global Call Out To Creatives – atsaharo ny fampielezana ny COVID-19.
Any Nepal, mandràra ny fanaparitahana tsaho ny lalàna famaizana nasionaly (fehezan-dalàna) 2017 ary na iza na iza manatanteraka izany na mitarika hanao izany dia azo saziana tsy mihoatra ny herintaona an-tranomaizina na mandoa onitra tsy mihoatra ny iray alina ropia Nepali (85,2 dolara amerikana) na sady azo gadraina no mandoa onitra.
Manoloana ny fielezan'ny vaovao diso momba ny COVID-19, nanentana ny vahoaka mba tsy hanaparitaka vaovao faikany momba ny COVID-19 amin'ny media sosialy ny foiben'ny polisy ao Nepal.
Fisantarana andraikitra iray hafa natomboka tamin'ny 2 aprily 2020 ny Nepal Fact Check . Samy manamarina ny zavamisy niely tamin'ny media sosialy ary koa ny vaovao navoaka tamin'ny haino aman-jery tao Nepal na ny South Asia Check na ny Nepal Fact Check.
Na izany aza, tsy afaka manamarina ny vaovao rehetra mivezivezy amin'ny aterineto ny mpanamarina zava-misy. Ny mpamaky koa dia afaka mampiasa ireo teknika tsotra hanamafisana ny maha-marina ny vaovao sy ny sary alohan'ny itiavany na hizarany izany, ary hanampy hanaparitaka izany.
— AFP Fact Check 🔎 (@AFPFactCheck) April 2, 2021
Tratry ny Andro Manerantany momba ny Fanamarinana ny Zava-misy! Jereo ireo andiana horonan-tsary fohy vaovao manazava ireo teknika tsotra fanamarinana zava-misy, manomboka amin'ny fikarohana sary miverina